Ubomi bukaPhil Collins: "Andikafi nangoku" | Uncwadi lwangoku
Ubomi bukaPhil Collins: "Andikafi nangoku"
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | I-Biography
UPhil collins. Imbali yobuqu
“Mhlawumbi ungumlandeli okanye unomdla malunga nomntu onzima owayeqhubeka nokuhamba kwiitshathi kwiminyaka engamashumi amathathu eyadlulayo. Kwimeko nayiphi na into, ndiyakwamkela. Oko kubeka kwiphepha elingasemva lale mifanekiso engamaphepha engama-452 ethi uPhil Collins, igubu laseBritani eliyintsomi nemvumi (1951), usandula ukupapasha. Iyathengiswa ukusukela nge-20 ka-Okthobha ophelileyo.
Ke abona bantu bathandayo bangenamiqathango (phakathi kwabo ndizibalayo kule minyaka ingamashumi amathathu) sinethamsanqa. Ngubani onokungqina ngemvakalelo yobugcisa bakhe Ikonsathi engalibalekiyo endiyibonileyo eLas Ventas kwi1994-, Siza kuhlala sibeka loo mculo ngaphezulu kwayo nayiphi na i-chiaroscuro ebomini bakho. Sonke sinazo. Kwaye eli nqaku ndingathanda ukunikezela kumhlobo, mhlawumbi omnye wabalandeli abazinikeleyo. Yenzelwe wena, Marijose.
Imakethi igcwele i-biografi kunye neengxelo zeembali zeemvumi. Ngoku uBruce Springsteen uyayaphula kwaye ujonge abo bazakukhukula iishelufa ngokusweleka kukaLeonard Cohen. Kodwa lowo usaphila, kwaye ke ufuna ukugxininisa kwisihloko, ngu Phil Collins. Mayibe yiminyaka emininzi.
Andikafi okwangoku ichazwa njenge Imbali apho imvumi ibeka khona amakhadi etafileni kwaye ithethe ngaphandle kweenwele kulwimi lweengoma, iikonsathi, impumelelo kunye nokusilela. Kunye nobomi bakhe bobuqu: imitshato yakhe emithathu, abantwana bakhe, uqhawulo-mtshato, iingxaki zempilo kunye notywala kule minyaka idlulileyo ... Ngapha koko, yonke into ejikeleze ubomi obuzele yimpumelelo nokwamkelwa kude kube kude kubukho bokwenyani.
Into enomdla malunga nokufikisa kwam ukuba ndimamele kwaye ndinqule, kunye neehormones ezigxothiweyo, uDuran Duran okanye uSpandau Ballet, kukuba le mvumi incinci yangena ngaphandle kokuthandabuza, incinci into ngokubanzi kwaye inelizwi elingaqhelekanga. Ichickpea Ngoku umhlobo umbiza ... Akukho nto yokwenza ingelosi ebomvu eyayinguSimon Le Bon okanye ilizwi elihle kakhulu kunye nesityalo sikaTony Hadley. Ukongeza, wayedlala nemigqomo, ngendlela efihlwe ngayo amahlwempu ahlala ephakathi koothixo abaninzi abenza ikatala kunye nee-divos kwimakrofoni.
Ke kufanele ukuba ikhona into- kwaye kufuneka-abe noCollins ukuze ngoku kwaye ngoku sele engomnye wabaculi ababalaseleyo benkulungwane yama-XNUMX. Es enye yeemvumi ezimbalwa ezithengise ngaphezulu kwekhulu lesigidi seerekhodi. Uyenzile zombini njengelungu leqela kunye nomsebenzi wobomi bodwa. Uphumelele I-Grammys, iGlobal Globes kunye ne-Oscar ngo-1999 yeNgoma eNgcono, ukusuka kwingoma yesandi ye Tarzan ngemixholo yakhe yonke. Kodwa kukho igalelo elingenakubalwa kwiingoma ezininzi, ukusebenzisana neemvumi eziphambili kwihlabathi (Eric Clapton, Sting, Mark Knophler, David Crosby ...).
Waqala ukudlala amagubu okoko wanikwa igubu phantse ngaphambi kokuba azi ukuhamba. Ndiyithande kakhulu iRingo Starr kunye nokuqhushumba kwenkcubeko eLondon kwiminyaka ye-60s yeyona ndawo ifanelekileyo yokufunda urhwebo.. Kwaye wayenza kakuhle kuba xa wayeneminyaka eli-19 ubudala wakwazi ukufikelela kuye ngoGeorge Harrison owammisela ukuba ajongane nengoma yokudityaniswa kweengoma zeBeatles.
Emva koko intengiso ekhangela "umbethi obuthathaka kumculo we-acoustic" kunye iingcango zavulwa ukuze kubekwe intliziyo yesingqisho kwiGenesis. Uthathe indawo yomculi uPeter Gabriel xa wayeshiya ukuyilwa kwasekuqaleni kwaye akukho mntu waphoswa nguGabriel. Kwaye ke yonke impumelelo emhlabeni.
Endleleni, ushiye loo mitshato mithathu kwaye phantse ubomi bakhe. Izinto zaqala ukumhambela kakubi xa watshintshisa igubu ngombhobho. Washiya iGenesis ngo-1996, kodwa ayizange iphinde ifane. Ukutyhubela iminyaka, ukusetyenziswa kwe-steroids, iingxaki kwi-vertebrae, iingqiniba ezinemithambo etyumkileyo kwaye, kamva, i-60% yokuva ilahlekile. Kwaye kunjalo ngaphezulu kwesiqingatha senkulungwane bedlala imigqomo zihlawulwe. Ngaphezulu kwayo yonke into, kunye nomzuzu wokugqibela, utywala.
Kodwa umntu ophumelele kakhulu kwaye waphantse waphulukana nayo akanako ukubethwa. Kwaye eyona nto intle kakhulu kukuyixela, bhengeza umsebenzi omtsha kwaye ubuyele eqongeni. Ukongeza, udlulisele izigubhu kuye nakubani na anako: unyana wakhe oneminyaka eli-16 ubudala uNicholas, ngokungathandabuzekiyo ophethe igazi likayise. Ikonsathi zakhe kwihlobo elizayo sele zithengisiwe, kodwa mhlawumbi uya kuba ngexesha lokuyibona. Kwaye ukuba akunjalo, kukho lo mbhalo-ngcaciso. Ndiceba ukuyonwabela kwaye ndingayeki ukumamela le ngoma yeengoma.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » I-Biography » Ubomi bukaPhil Collins: "Andikafi nangoku"
UMariola uthethe ngeemvumi ezinkulu kakhulu kweli nqaku limangalisayo. Enkosi ngale hambo ecaleni kwendlela ka Mnumzana Collins, bendingazi ngamava amaninzi, kwaye enkosi ngokukhankanya enye yeemvumi ezinkulu ze-80s, ngokwembono yam ethobekileyo, osandenza ndithandane namhlanje: Tony Hadley. Ewe, ezo SPANDAU zobuthixo.
UMaria madariaga sitsho
Uphengululo lwakho luhle kakhulu Mariola, ukwazi nje eli phepha ndilifumene lilungile. Ngokubhekisele kuCollins, ikwenza ufune ukuyithenga incwadi kwaye uyigqibe ngokuyifunda, inkulu, ukusuka kwiGenesis, apho ngokokubona kwam, ishiye ezona zibalaseleyo, apho inegalelo kwinto eya kuba lelinye lawona maqela aqhubela phambili kwaye aqhubeke nomsebenzi wakhe wedwa. Mhlawumbi iividiyo zinokubandakanya into evela kwi-Nursery Cryme okanye ukuthengisa iNgilane ngePonti apho akhanya khona kwimigqomo, kodwa akukho nto, konke kulungile. Ukubulisa.
Phendula uMaria Madariaga
Enkosi ngengcaciso yakho, Maria.
"Nemesis" kunye ne "Black Dahlia". Ukuphindwaphindwa kukaNesbø kunye no-Ellroy
Ukonakaliswa egameni likaHarry Potter